Waxaan Leeyahay Dambi Baraha Bulshada | Martech Zone
Waxaan leeyahay dambi. Maya - dambi maleh inaan ku qarashgareyn lahaa labo lacag ah sawir kayd ah halkii aan iska qaadan lahaa sawir aniga qudhaydu. Waa dambi inaanan kaqaybqaadan shabakadaha bulshada.
Google+ ma caawin Waxay umuuqataa hadda inay tahay inaan kusii wado wada sheekaysiga 5 caalam halkii aan ka ahaan lahaa 'afarta' balooggayga, Facebook, LinkedIn iyo Twitter. Hadda waxaan iska diiwaan galiyay Spotify… waxaan maqlay Pandora inuu dhawaan bilaabayo shabakad bulsheed. Waxaan sidoo kale u maareeyaa shabakad bulsheed Vets Ciidanka Badda.
Isku darka tan oo shaqo ah iyo xanuunno dhawrkii toddobaad ee la soo dhaafay ayaa igu kalifay dambi… Kulama hadlayo. Kuu xiriirin maayo. Kama samaynayo qaybtayda sidii aan kaaga caawin lahaa inaad xiisaha ii hayso. Oh hubi… Waxaan tuuray shaashad ka mid ah sawir qaadayaasha si aan kuu xiiseeyo… iyo dhowr xiriiriyeyaal u qalma halkan iyo halkan si aad uga faallooto. Laakiin waan ogahay inaanan sameynayn wax igu filan oo aan ku haysto.
The xadgudubka waa i dilayaa.
Xaqiiqdii ma kaftamayo. Waxaan rabaa inaad ogaato maxaa yeelay waxa laga yaabaa inaad isla waxaas oo kale ku soo marto. Waxaan maqlaa dadweynow markasta oo ay i weydiiyaan, “Sidee ayaad waqtiga ku heshaa?”. Ma sahlana. Xaqiiqdii - inta udhaxeysa inaad jiran tahay, aado dibedda, dib u guurista guryaha, aabbe, hadal dadweyne, socodsiinta raadiyaha, sameynta horumarka, wicitaanada iibka, qoritaanka daabacadaha iyo runti fulinta qandaraasyada aan la leenahay macaamiisha… Waxaan ahay aan haynin. Waad ku mahadsan tahay wanaagga waxaan haystaa shaqaalahayga, asxaabteyda iyo macaamiisha fahmaya iyo rajooyinka i dulqaadanaya
Markaa waxa ugu horeeya ee la aado waxay ahayd istiraatiijiyaddii aad ii gaysay meesha aan joogo… joogitaankayga bulsho. Waqtiga xaadirka ah, waan ogahay inaan qaadan karo garaac yar oo aan dib u soo laaban doono. Laakiin haddii aan sii wado sii wadista luminta xawaareygan, waxay saameyn taban ku yeelan doontaa wax kasta oo aan sameeyo. Waan ka sii fiicnaan doonaa. Waan ballan qaaday. Weli ha iga tagin - beryahan maadan arag wanaaggaygii waxaanan kuu xaqiijin karaa inay waxyaalo waaweyn dhowaan soo socdaan! Ku dhaji agagaarka.
Mar labaad… ka xumahay sawirka. Ma aanan helin waqti aan ku kala sooco goobaha sawirrada lagu kaydiyo. Waa 10:40 PM… Guriga ayaan aadayaa hada.
Tags: dardarcadaadiskadambi baraha bulshada
Jul 19, 2011 markay tahay 5:15 PM
Wax xun ayaan kugu dareemay sidaa darteed waxaan soodajiyay sawirkaaga kadibna waxaan galiyay iStockPhoto. Marka hadda * waa * sawir kayd ah! (kaftanka dabcan)
Jul 19, 2011 markay tahay 5:58 PM
Jul 22, 2011 markay tahay 12:46 PM
Is daji, neefta ku hay. Carruurta isku duub, dhunkada naagta, fiiri qodista cusub. Kuwii muhiimka ahaa wali way joogi doonaan, berri.